'क्रूर समर' - नयाँ अमेजन प्राइम श्रृंखला बेजिया
सुसाना Godoy | 20/07/2021 14:00 | समाचार
यो सत्य हो कि हामी मध्ये धेरै जसो ग्रीष्म loveतु मन पराउँछन्, कहिले काल्पनिक मा यति राम्रो विकल्प छैन। हामीले पहिले नै धेरै अवसरहरूमा हेरेका छौं कि कसरी गर्मी asonsतुहरू सधैं अपेक्षित रूपमा बाहिर निस्कदैनन्। यसैले, अमेजन प्रधानमन्त्री एक नयाँ थ्रिलरमा शर्त लगाउनुहोस् जुन तपाईंलाई मोहित गर्नेछ।
यो एक श्रृंखला हो कि शीर्षक छ 'क्रूर समर' र उहाँसँग हामीलाई धेरै कुरा भन्नु छ। गर्मी कम हुँदा मनोरन्जन गर्न यो एक राम्रो विकल्प हो र तपाईं आफ्नो घर वा छुट्टीको ठाउँ छोड्न सक्नुहुन्न। तपाईं पक्कै यस तरिका मा आफूलाई मनोरन्जन छनौट हुनेछ। थप जान्न चाहानुहुन्छ?
1 'क्रूर समर' को उत्पादन
2 'क्रूर समर'का नायकहरू को हुन्?
3 हामी श्रृंखला 'क्रूर समर' मा के फेला पार्नेछौं
4 जब यो अमेजन प्राइममा सुरू हुन्छ
'क्रूर समर' को उत्पादन
जेसिका बायल जस्ता प्रख्यात नामहरू यस उत्पादनलाई पहिले नै छोडदै छन्। हो, अभिनेत्रीले सिनरमा उनको कार्यकाल पछि पर्दा पछाडि जाने निर्णय गरेकी छिन। सफलता, जुन पहिलो सीजनको दौरानमा उसले आफ्नो चरित्रमा केन्द्रित गर्‍यो र जसका लागि उनले बचेराहरूको समीक्षा प्राप्त गरे। यो सत्य हो कि बीएलका कार्यहरू दर्जनौं र उसले सफलताहरू द्वारा गणना गर्न सक्दछ। त्यसोभए, निश्चित रूपमा अब तपाइँ पछाडि छोड्नुहुनेछैन। तर उनी एक्लै आइपुगेकी छैनन् तर उनीसंग मिशेल पर्पल पनि छिन्। दुई महान दिमाग र अमेजन प्राइममा जीवनमा एक श्रृंखला ल्याउनको लागि स्पष्ट फोकस जुन तपाईंलाई प्रभावित गर्दछ।
'क्रूर समर'का नायकहरू को हुन्?
जे होस् उत्पादनको हिस्सा वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ, तर श्रृंखलाका नायकहरू पनि पछाडि छैनन्। किनभने यस केसमा तिनीहरू ती हुन् जो यसलाई आकार दिन्छन्। हामी सुरु गर्दछौं ओलिभिया होल्ट, एक अभिनेत्री र गायक जो हामीले डिज्नी च्यानल श्रृंखलामा देख्यौं, जब देखि उनको क्यारियर एक बच्चाको रूपमा शुरू भयो। अर्कोतर्फ, चियारा अरेलिया, एक अमेरिकी अभिनेत्री पनि छन्। माइकल ल्यान्ड्स, जसलाई हामीले अन्तिम गन्तव्य २ मा देख्यौं, फ्रोय गुटियरेज, हार्ले क्विन स्मिथ वा ब्लेक ली अध्याय पछि तपाईंले देख्नुहुने केही व्यक्तिहरू हुनेछन्।
हामी श्रृंखला 'क्रूर समर' मा के फेला पार्नेछौं
सत्य यो हो कि यो एक श्रृंखला हो जुन अन्य थ्रिलर श्रृंखलासँग कुनै सरोकार छैन। किनभने यस अवस्थामा यसले s ० को दशकमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ र कुल sum ग्रीष्म narतु वर्णन गर्दछ। यसमा हामीलाई एउटा भयावह घटना बताइनेछ जुन एउटी युवतीको गायब हुनु हो। तर एक गायब हुने क्रममा, अर्को युवती सबै भन्दा लोकप्रियमा परिणत भयो। भन्नुपर्दा, यस्तो लाग्छ कि यसले हराएको केटीको स्थिति ओगटेको छ। जहाँसम्म यस्तो देखिन्छ कि ती दुई बिच धेरै धेरै संयोग थिएन, सबै चमकहरू सधैं सुनको हुँदैनन्। हामीले उल्लेख गरेका यी युवती सबैलाई सब भन्दा मीठा केटीहरू मध्येको जस्तो देखिन्, तर उनी विपरितमा परिणत भइन्। निस्सन्देह, जब सम्म हामीले श्रृंखला हेर्दैनौं हामी यो व्यवहारको कारण जान्दैनौं।
अब हामीसँग प्लट छ, यस अमेजन प्राइम श्रृंखलाको बारे के फरक छ? हो, यद्यपि रहस्य र षडयन्त्रहरू यसको हिस्सा हुन्, यो मात्र त्यो विस्तृत होईन। तर हामी प्रत्येक एपिसोड हेर्नेछौं, विभिन्न दृष्टिकोणबाट सम्बन्धित हुनेछ। त्यसोभए मात्र, सायद, हामी थोरै बढी प्रत्येक विचार र इतिहासको प्रत्येक जरा बुझ्नेछौं। त्यसोभए त्यसका लागि, हुन सक्छ हामीलाई पहिले नै थाहा छ कि यो एउटा प्लट हो जुन हामीलाई पहिले जस्तो कहिल्यै काट्ने छैन। तिमीलाई लाग्दैन?
जब यो अमेजन प्राइममा सुरू हुन्छ
यो भन्नु पर्दछ कि हामी यस श्रृंखला को कुल १० एपिसोड पाउनेछौं। हामी तिनीहरूलाई शुक्रवार, अगस्ट from बाट देख्न सक्छौं। त्यहाँ तपाईंसँग पहिले नै यो कथाको साथ एउटा अपोइन्टमेन्ट छ जसले तपाईंलाई उदासिन छोड्दैन जस्तो देखिन्छ। यो एक को साथ शुरू हुनेछ पायलट एपिसोड मैक्स विन्कलर द्वारा निर्देशित। अवश्य पनि, यो पहिले नै ठूलो सफलता हुनु हो। के तपाइँ तपाइँको महान मनपर्ने बीच 'क्रूर समर' राख्न जाँदै हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » समाचार » 'क्रुएल समर' मा थ्रिलरमा अमेजन प्राइम शर्त